स्वास्थ्य Archives | बिगुल न्यूज
के तपाई मोजा बिना जुत्ता लगाउनु हुन्छ ? लगाउनुहुन्छ भने यस्तो घातक रोग लाग्न सक्ने !
आजकल मोजा बिना जुत्ता लगाउने एकप्रकारको फेशननै भैसकेको छ । यसरि मोजा बिना जुत्ता लगाउनेमा युवाहरु बढी देखिने गरेका छन् । बलिउड देखि हलिउड सम्मका एक्टर तथा सेलिब्रेटीबाट सुरुभै अहिले …
के तपाईको बच्चामा पनि माटो खाने आदत छ ?
असार ३२, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ : धेरै बच्चाहरुमा माटो खाने बानी हुन्छ। बच्चाहरुका यस बानीले अधिकांस माता-पिता चिन्तित रहन्छन्। यदि तपाईको बच्चाको पनि माटो खाने बानी छ भने उसलाई माटो खाने बानीबाट छुटाउने सबैभन्दा …
म प्रत्येक दिन हस्तमैथुन गरेर सुत्छु । त्यसले मलाई अर्को दिन थकान तथा कमजोरी महसुस गराउँछ । यसले भविष्यमा मेरो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर त गर्दैन ? –एस। हस्तमैथुन मानिस जन्मजात नै …
गर्मीमा काँक्रो खानुस्, क्यान्सर, मुख गन्हाउनदेखि पाचन प्रणाली सम्मका यस्ता समस्याबाट छुट्कारा पाउनुस्
असार ०१, २०७५ बिगुल न्यूज - DB
एजेन्सी । गर्मी याममा हाम्रो शारिरलाई अत्याधिक मात्रामा पानीको आवश्यकता पर्दछ। गर्मीमा शरीरलाई पानीको मात्र दिने केहि यस्ता फलफूलहरु छन्, जुन हाम्रो शरीरक लागि निकै उपयोगी सावित हुन्छन्। यस मध्ये एकको …
के हो सेक्स थेरापी ? यस थेरापीमा कपडा उतार्नुपर्छ ?
जेठ १७, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा सेक्स शब्दलाई अश्लील मानिन्छ तर पश्चिममा सेक्स थेरापी अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। एभ्ररीहेल्थ डट कमले सेक्स थेरापीको बारेमा ७ तथ्यहरु बताएको छ। …
यस्तो खाना जसले तपाइको मुडलाई रोमान्चक बनाउने काम गर्दछ !!
जेठ १२, २०७५ बिगुल न्यूज -MS
एजेन्सी प्राय हामी कहिले काहीं कुरा-कुरामा विनाकारण रिसाउने गर्दछौं । यदि तपाईलाई पनि त्यसै-त्यसै दिक्क लाग्दछ भने एक यस्तो बिशेष फूड रहेको छ जसले तपाइको मूड फ्लक्चुएशनलाई तत्काल ठीक गर्ने …
आँखालाई स्वस्थ, चम्किलो र सफा राख्नको लागी सरल घरेलु उपाय , केवल १० मिनेटमा राहत
एजेन्सी आँखा हाम्रो शरीरको संबेदनशील अङ्ग मध्य एक हो । यो बिना कुनैपनि कार्य गर्न असमर्थ हुन्छौ । मनुष्यको शरीरमा आँखा नै त्यस्तो अङ्ग हो जसको उपयोग सबैभन्दा धेरै हुने …
• गीता कुँवर अछाम : नेपालको सविधानले २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र महिलाको विवाहका लागि कानूनी मान्यता दिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो उमेरका महिला सन्तान जन्माउन पनि शारीरिक रुपमा …
एसिडिटी ग्याष्ट्रिकको उपचार कसरी गर्ने ?
• डा. प्रदीपकुमार यादव (पिके) वरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ मेडिकेअर अस्पताल, चावहिल नेपालीलाई एसिडिटी (ग्याष्ट्रिक)को समस्या नयाँ होइन । एसिडिटी (ग्याष्ट्रिक) नभएको मानिस भेट्नै मुस्किल छ । साना बालबालिकादेखि वयस्क र …